उपसभामुख « Janata Samachar
मेराे लडाइँले सफलता पायाे : उपसभामुख
काठमाडाैं । उपसभामुख डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले आफूले लडेकाे लडाइँले सफलता प्राप्त गरेकाे बताउनुभएकाे छ । उपसभामुख पदबाट राजीनामा दिएकाे घाेषणा गर्दै तुम्बाहाङ्फेले आफूले ठूलो लडाईँ लडेको र त्यसमा सफलता मिलेको
आज प्रतिनिधिसभा बैठक: तुम्बाहाङ्फेको राजीनामा कि सञ्चालन ?
काठमाडौं । सभामुख उम्मदेवारको कारण पटकपटक सर्दै आएको प्रतिनिधिसभा बैठक आज बस्दैछ । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी( नेकपा)ले सभामुखको उम्मेदवार तोकेपछि बस्न लागेको प्रतिनिधिसभा बैठक अर्थपूर्ण मानिएको छ ।
उपसभामुख तुम्बाहाङ्फेले राजीनामा दिने
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले पदबाट राजीनामा दिनुहुने भएको छ । उपसभामुख तुम्बाहाङ्फेले प्रधानमन्त्री केपी ओली र नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँगको छलफलपछि राजीनामा दिने तयारी गर्नुभएको हो ।
उपसभामुखज्यू राजीनामा दिनुस्, बाटो खाेल्नाेस्
सभामुख चयन हुन नसक्दा संघीय संसदको हिउँदे सदन सुचारु हुन सकेको छैन । सत्तारुढ दलको आन्तरिक किचलोका कारण यसो हुन नसकेको सार्वजनिक तहमै छताछुल्ल भइसकेको छ । यही मेसोमा उपसभामुखले
उपसभामुखबाट राजीनामा दिन तुम्बाहाङ्फेलाई नेकपाको आग्रह
काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपांले प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख डा. शिवमाया तुम्बाहाङफेलाई राजीनामा दिन आग्रह गरेको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शनिबार बसेको सचिवालय बैठकले उपसभामुख तुम्बाहाङफेलाई राजीनामा दिन आग्रह
हिउँदे अधिवेशन शुरू, उपसभामुखले अध्यक्षता गर्ने
काठमाडाैं । संसदको हिउँदे अधिवेशन आजदेखि शुरु हुँदैछ । शुक्रबार दिउँसो ४ बजेका लागि राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले बैठकको आह्वान गर्नुभएको छ । उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङफेले बैठकको अध्यक्षता गनुहुने भएको छ
हिउँदे अधिवेशनको पहिलो बैठककाे अध्यक्षता उपसभामुखले गर्ने
काठमाडाैं । प्रतिनिसभाको हिउँदे अधिवेशनको पहिलो बैठक उपसभामुख डा.शिवमाया तुम्बाहाम्फेकै अध्यक्षतामा शुरु हुने भएको छ । संसद बैठकको शुरुवात गरेरमात्र राजीनामा दिने उहाँको अडानमा नेकपा नेतृत्व सहमत भएपछि शुक्रबारको बैठक
उपसभामुख तुम्बाहाम्फेलाई राजीनामा गराउँदै नेकपा
काठमाडाैं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले संसदको हिउँदे अधिवेशनअगावै उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाम्फेलाई राजीनामा गराउने भएको छ । पुस ४ मा शुरु हुने अधिवेशनको अध्यक्षता राजपा नेता एवं जेष्ठ
नेकपाको सभामुख वा उपसभामुख गुम्ने
सभामुखको लागि उपसभामुख डा शिवमाया तुम्बाहाम्फेले पनि उमेदवारी दिन पाउनु हुनेछ ।